Hyperlink Nhare dzeNhamba neAnchor Mateki
Chipiri, August 24, 2010 Chitatu, Ndira 26, 2022 Douglas Karr
Shamwari dzangu dzinozowana kick iyi, nekuti ini kashoma kupindura foni yangu ... asi hei… izvi ndezvekubatsira dzako kambani, kwete yangu! Nekuvhiya kukuru muPhones, Android uye mamwe mafoni, inguva yekuti iwe utange kuvandudza saiti yako kuti ishandiswe pane nharembozha.
Makambani ari kuona chikamu chakakosha chevashanyi vavo vachisvika vachishandisa nharembozha. Kuve newebhusaiti inopindura inotaridzika zvakanaka pane nharembozha haisisiri sarudzo, chinhu chinodiwa.
Hechino chinhu chimwe chinowanzo furatirwa kana uchigadzira nharembozha… hyperlinking nhamba dzefoni dzako kuitira kuti vanoshandisa nharembozha vangodzvanya pavari uye vatange kufona. Iyo syntax iri nyore.
A typical anchor tag ine webhu chinongedzo inoshandisa URL mune kukosha, email email inoshandisa mailto… Syntax yenhamba yefoni iri nyore tel. Ndakaedza kukosha ne uye pasina maparentheses, nguva uye madheshi uye zvese zvinoratidzika kushanda pazvose iPhone uye Droid. Nekudaro, ini ndinokurudzira kuisa kodhi yenyika munhamba dzerunhare uye kubvisa ese madheshi, nzvimbo, kana madots mu href kukosha.
Kana iwe uchida kuyera kuti vangani vanhu vari kudzvanya aya malink, unogona kuverenga chinyorwa chedu pakuita wedzera Chiitiko cheGoogle Analytics uchishandisa Google Tag Maneja.
Tags: href telhtml kodhi yenhamba yefonihtml foni chinongedzohtml nhamba yenharehtml teki yefonihtml nhare yekubatanidzahyperlink nhamba yefonihyperlink nhamba dzenhareiphone nhamba yekubatanidza linkbatanidza nhamba yefoninhare yekufambisa nharenharembozhanhamba tagrunhare chinongedzo htmlnhamba yefoni yekubatanidzanhamba dzenhare chinongedzo htmlkumaka fonimateki efonitag nhare mbozhatag nharembozhatag nhare mbozhatag nharembozhatag nhamba dzenharetagged nhamba yefonitel chinongedzo html
Genius Doug! Ronga kutanga kushandisa izvo pane ese emasaiti evatengi vangu. Zvakanaka kana ndikaisa izvi pablogi rangu? Chokwadi kukupa hunyori hwakazara. Very cool! 😎
Sep 6, 2010 na11:37 PM
Saka pane chikonzero here cheKUSATI kuisa mabara, nguva, kana madheshi munhamba dzerunhare? Uye iyo nhamba yefoni yehtml inoita senge tag yezita here? Pane chero SEO inobatsira kuita teki yezita mukati me href kodhi?
@edeckers Iyo RFC3966 chiyero hairatidzike sekutsigira maparenthesis asi inotsigira toni yedzimwe sarudzo uye zviratidzo zvekufona kune dzimwe nyika, mawedzero, nezvimwe:
Kana iri SEO, ini handisi kuona kuti sei kwete! Zvichida zita rebhizimisi + "nhamba yefoni" inogona kuva nzira yakanaka yekuita!
Mhoroi, izano rinotonhorera asi ndakaedza izvi uye Firefox yakandipa meseji yakashata ichiti yaisaziva kuverenga chinongedzo. Kwandiri, hazvina kukosha meseji yakashata kana munhu akadzvanya chinongedzo padesktop kuti nharembozha ikwanise kuwana chinongedzo. "Long-press" pane nhamba yefoni pa Android uye inoedza kufonera nhamba zvakadaro. Ndiri kukanganisa here? Pane basa here?
Nov 26, 2011 na9:02 PM
Izvo zvakanangwa kune nhare mushandisi, Mumba.
Aug 28, 2013 na2:46 PM
Iwe unogona kugara uchidzivirira izvo nekuona browser. Iise mu div yakavanzwa kune isiri-mobile/hombe resolution browser.
Ndatenda nekuda kweiyi referrer post Doug :)
Jun 14, 2011 na11:20 AM
Ndokutenda zvikuru. zviri nyore sezvawataura, asi zvinoshanda. Iwe unogona kuenda nhanho dzinoverengeka mberi uye woita kuti ibatanidze kune icon uye gadzira zita mune anchor tag kuratidza nhamba yefoni yako uye nemimwe mirairo yevashandisi vanotenderedza mbeva yavo pamusoro peiyo icon. Ndatenda zvakare!
tinokwanisawo kuwedzera mameseji kune hyperlink nhamba yefoni?
Sep 28, 2011 na4:11 PM
Ini ndinotenda iyo href inobvumira chete inobvumira manhamba… zvisinei, unogona kuisa chero mavara aungade mukati meiyo anchor tag pachayo.
Iri izano rakakura! Ini ndichatanga kuwedzera izvi kumasaiti kubva zvino zvichienda mberi. Ndatenda!
Jan 22, 2013 na12:05 PM
Ini handisi 100% chokwadi (uye ini ndoziva kuti iyi inhaurirano yechinyakare saka iyi inogona kunge isingadzokerike) asi vazhinji vemafoni mazuva ano havaite izvi zvino?
Jan 22, 2013 na1:37 PM
@ facebook-502306174: disqus vazhinji vanozviita, asi vazhinji vanomiririra nhamba zvisizvo kunze kwekunge waitsanangura.
Nov 19, 2013 na9:21 AM
Kungogadzirisa kwakapusa ... iwe wati unokurudzira isu "chengeta zvese asi iyo chaiyo manhamba MUiyo href kukosha"
Ndine chokwadi chekuti "chengeta zvese asi iwo chaiwo manhamba YEDU YE href kukosha"
Kana kuti zvimwe unenge uchingoridza nhanho dzepunctuation 🙂
Jul 24, 2015 pa 7: 37 AM
Thanks Douglas, Ndeipi Social Media Bar yauri kushandisa? Blog rako rinotaridzika zvakanaka uye une zvakawanda zvemukati zvemukati. Unoda kubatana paGoogle Plus. Thanks zvakare
Jul 24, 2015 na11:04 PM
Thanks Dean! Mushure mekutsvaga zvakanyanya kutenderedza mambure kune mhinduro hombe, ndakamhara Shareaholic. Iyo ine matani akawanda maficha atisingashandise - asi inochinjika zvakanyanya!
Aug 14, 2015 na3:49 PM
Ini handisati ndaziva kubva pane ino koramu, kutumira email nhamba yefoni - kunharembozha, saka mukuru wangu anogona kungoibaya nekufona.
Aug 15, 2015 na4:21 PM
Mhoro Dee, email yako software inoda kutsigira HTML uye kugona kuwedzera hyperlink yatinotsanangura pamusoro. Ichi chinyorwa chaive chakawanda nezve maitiro ekuita izvi pane nharembozha, kwete email.
Gumiguru 5, 2015 na4: 11 PM
Mhoro Douglas, izvi zvinoshanda sei kune vanofona vekunze? Unofunga kuti zvakanaka here kushandisa nhamba yepasi rese (semuenzaniso +44) kana kodhi yenzvimbo?
Kutaura chokwadi, Ben, ndinotenda kuti inoshanda zvisina mhosva. Ndinotenda kuti vazhinji vanofona pasi rese vanoshandisa macode enzvimbo. Nigeria scam artists vanobva vauya mupfungwa. 🙂
Gumiguru 20, 2015 na7: 32 PM
Hi, hashtag inogona kushandiswa se hyperlink kutanga kufona? Ndakanzwa zvichitaurwa rimwe zuva asi handisati ndazviona. Ndatenda!
Gumiguru 20, 2015 na10: 51 PM
Izvi handisati ndazviona. Ndinofunga iwe unogona kunyora imwe mhando yeplugin kana script, asi haisi yekuzvarwa HTML basa.
Gumiguru 23, 2015 pa 12:46 AM
Ini ndinogadzira sei "kufona izvozvi" bhatani mune email yekushambadzira chirongwa seMicrosoft Publisher? Zvakare ndaizoiisa sei mumailchimp?
Nov 4, 2015 na12:07 PM
Saka ini handifanire kuisa - kana . pakati penhamba? Zvakare, ungasanganisira sei yekuwedzera kuitira kuti hyperlink ifonere yekuwedzera zvakananga?
Nov 4, 2015 na4:17 PM
Mukati me href kukosha, haudi chero madheshi kana madotsi pakati penhamba. Mukati meiyo anchor text, unogona kunyora chero chinhu.
Chinyorwa chikuru - chinobatsira zvikuru. Ndatenda!
Aug 2, 2016 na10:59 PM
Mhoro Douglas, Ndatenda zvikuru nekugovera iyi kodhi.
Zano rakanaka Doug! Ndatenda. Ichi chinyorwa chinonyanya kukosha, 6 makore gare gare uye zvese zvichienda mobile.
Zvinoshanda !! Ndatenda Doug !! 😉
Nov 17, 2017 na10:20 PM
Ndatenda nerubatsiro rwako!
Jan 2, 2019 na4:06 PM
Dzidziso inodzidzisa zvikuru! Chaizvoizvo, ini ndinoda chikamu che "tinya kufonera widget" pachinzvimbo che "inobatika nhamba yefoni" zvirinani. Mushure mekuedza iyo Callback Tracker plugin pane yangu saiti, ini ndinoona mamwe akawanda mibairo nekugona kufonera madhairekitori angu, pane kuti vandifonere. Ini pachangu, ndinozviona sezvinodiwa pamasaiti mazhinji. Heino chinongedzo cheplugin https://callbacktracker.com/plugins/wordpress-click-to-call-plugin-install-tutorial/
Aug 6, 2019 na1:08 PM
Yakanyanya kutonhorera, ndatenda nekugovana!